Amaqhinga okukhupha usetyenziso kwiWindows | Iindaba zeGajethi
Kwiwebhu kukho abaphuhlisi abacebise inani elikhulu lezixhobo ezinokusinceda khipha usetyenziso lweWindows okanye abaqhubi, ezinokumela iphepha-mvume elihlawulelwayo kunye nezinye simahla. Kwisithuba esidlulileyo besikhuthaze ukusetyenziswa kwesixhobo esinomdla esinokusinceda "sinyanzele ukungafakwa" kwezicelo ekunzima ukuzisusa kwinkqubo yethu yokusebenza.
Ezi ndidi zezinye iindlela zisebenza kuphela xa kukho ingxaki ekufakweni kwezicelo kwiWindows, into engaqhelekanga kakhulu kwaye ke, ezinye iintlobo zezinye iindlela kufuneka zisetyenziswe; ngaphambi kokungxamela ukusebenzisa usetyenziso olunokonakalisa ubhaliso lweWindows, kungakulunga ukuzama ukusebenzisa ezinye zezi ndlela, ezingayi kubonisa naluphi na uhlobo lwengozi okanye ukonakala kwenkqubo yokusebenza.
1 Indawo yokuqala yokukhupha usetyenziso lweWindows
2 Okwesibini enye indlela yokuSebenzisa iiWindows usetyenziso
3 Enye indlela yesithathu yokungakhangeli usetyenziso lweWindows
Indawo yokuqala yokukhupha usetyenziso lweWindows
Iindlela kunye nezinye iindlela esiza kuzicebisa apha ngezantsi zinokusetyenziswa zombini Windows 7 kunye nohlobo lwayo lwamva nje. Kule ndlela yokuqala siza kuphakamisa ukwenza la manyathelo alandelayo:
Sisingise kwi «Iphaneli yokulawula»Iifestile
Ukusuka kukhetho olubonisiweyo sikhetha «Iinkqubo-> Khipha inkqubo«.
Ukusuka kuluhlu olubonisiweyo, sicofa kabini usetyenziso esifuna ukulukhupha.
Iwindow yokuqinisekisa ingavela ukwenza lo msebenzi.
Ibhokisi eyongezelelweyo inokuvela nayo, eya kusivumela ukuba sisuse ubumbeko okanye sisuse umkhondo othile wesicelo esikhethiweyo.
Masiqinisekise isenzo sethu ngokucinezela iqhosha le-OK kwiwindow.
Yiyo yonke into esiza kuyidinga ukuyenza ngale ndlela yokuqala, kusenokwenzeka ukuba kufanelekile ukuba siqale ngokutsha iiWindows ukuze utshintsho luqale ukusebenza; indlela iyasebenza naxa sifuna khipha abaqhubi besixhobo esifakwe kwiWindows.
Okwesibini enye indlela yokuSebenzisa iiWindows usetyenziso
Olu khetho lwesibini esiza kulukhankanya apha ngezantsi lunokusetyenziswa xa isicelo okanye umqhubi esifuna ukusikhupha enxulunyaniswa nezixhobo ezithile. Ukwenza oku, kuya kufuneka singene kwindawo apho zonke izixhobo zethu zibekwe khona, sikwazi ukufezekisa iinjongo zethu ngala manyathelo alandelayo:
Sifumana i icon ye «Ikhompyuter yam»Kwidesktop yeWindows (hayi indlela emfutshane).
Siyikhetha ngeqhosha lasekunene le mouse kwaye kwimenyu yokuma kwimeko leyo sikhetha «iipropati«.
Ukusuka kwicala lasekhohlo sikhetha ukhetho oluthi «Umlawuli wesixhobo«.
Iwindow entsha iya kuvulwa, kwaye kuya kufuneka uye kwi «Umlawuli«.
Apho kuya kufuneka sikhethe kuphela isithuba esithi «Khupha ngaphandle»Kwaye emva koko uvale ifestile nge«kwamkela«.
Njengoko besicebisile ngaphambili, le nkqubo inokuba luncedo xa ifuneka Khipha isoftware enxulunyaniswe nezixhobo zekhompyutha, Oko kukuthi, kumlawuli onokubakho. Kusenokufuneka ukuba uqalise kwakhona inkqubo yokusebenza ukuze utshintsho luqale ukusebenza.
Enye indlela yesithathu yokungakhangeli usetyenziso lweWindows
Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu ezi ndlela zikhankanyiweyo azisebenzi, enye enokusetyenziswa inokuthi iqale ixhomekeke ekusebenziseni i-terminal yolawulo, ebonisa ukuba biza "isikhawulezisi somyalelo" (cmd) kodwa ngemvume yomlawuli; oku, kufuneka kuphela:
Cofa kwiqhosha «imenyu yokuqalisa»Iifestile.
Bhala igama elithi «cmd»Kwaye kwiziphumo, khetha ukhetho oluza kusivumela ukuba silisebenzise ngeemvume zomlawuli.
Ngenye indlela kwiWindows 8 sinokucofa ekunene kwimenyu yokuqala yemenyu kwaye ukhethe umyalelo wokuyalela kunye neemvume zomlawuli.
Nje ukuba kuvulwe iwindow yesiphelo sendlela, kufuneka sibhale lo myalelo ulandelayo kwaye ucofe u «iqhosha.ngena«.
pnputil -e> »% UmsebenzisiProfayile% Desktopdrivers.txt
Ngamanyathelo esiwacebise apha ngasentla, ifayile ye-txt iyakwenziwa kwidesktop yeWindows, nangona ukuba sifuna ukutshintsha indawo singayenza ngokuzolileyo ngaphandle kwengxaki. ukulungisa isigwebo kwinxalenye yokugqibela ethatha indawo ye «Desktop».
Ngayiphi na imeko, kuyacetyiswa ukuba ushiye isivakalisi njengoko sinjalo ukufumana ifayile evelisiweyo ngqo kwidesktop.
Xa ifayile ivelisiwe kuya kufuneka siyicofe kabini ukuze ivule kwangoko, isiza apho inxenye yesibini yeqhinga; le fayile ye-txt iya kuba luluhlu lwabo bonke abaqhubi abafakiweyo KwiWindows, ukukhangela umenzi wale nto sifuna ukuyikhupha kunye nesoftware yayo.
Into ekufuneka siyinikele ingqalelo kuluhlu ikwicandelo le- «Papasha iGama», kwaye kuya kufuneka uqaphele ifayile enegama eline «oemxx.inf». Ukuba siyifumene, ngoku kufuneka sibhale oku kulandelayo kwisiphelo somyalelo:
i-pnputil -f -d oem ##. inf
Ukuba siqhubeke ngendlela ebesicebise ngayo, abaqhubi kunye nesoftware enxulumene nale siyikhethileyo iya kukhutshwa ngokupheleleyo.
Ngale ndlela zintathu sizikhankanyileyo, sinokukhetha enye yazo ukuba ikwazi ukukhipha uhlobo oluthile lwesicelo nangona, sinokucebisa ukuba Ukusetyenziswa kwayo kunokusetyenziswa ngokufanelekileyo kubalawuli yesixhobo esithile okanye izixhobo zekhompyutha ngaphakathi kweWindows.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ezinye iindlela zokukhupha usetyenziso lweWindows
Uyifumana ngokukhawuleza njani imimiselo eyahlukeneyo kwi-Android